Iyo nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 yaburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 yaburitswa
Darkcrizt | | Free Software
Munguva pfupi yapfuura Iyo Apache Software Foundation yakazivisa iyo nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 yakasanganiswa yekusimudzira nharaunda. Iyi vhezheni itsva inouya neshanduko shoma sezvo rutsigiro rwekuyedza rwakawedzerwa kune mamwe mataurirwo matsva.
Apache NetBeans 11.0 inova yechitatu vhezheni yakagadzirirwa neApache Foundation mushure mekuchinjiswa kweNetBeans kodhi kuenda kuOracle.
1 About NetBeans
2 Apache NetBeans 11.0 Kiyi Nyowani Zvimiro
3 Maitiro ekuisa NetBeans 11.0 paLinux?
NetBeans inzvimbo yemahara yakasanganiswa yekuvandudza, inoitirwa kunyanya mutauro weJava. Kune zvakare akakosha manhamba ema module ekukuwedzera. NetBeans IDE chigadzirwa chemahara uye chemahara pasina zvirambidzo zvekushandisa.
NetBeans chirongwa chakabudirira kwazvo chakavhurika sosi ine mushandisi muhombe, nzanga inogara ichikura.
Parizvino, chirongwa ichi chichiri mukuvandudza kweApache, iyo inogadzirira zvivakwa, inoongorora kuchena kwelayisensi uye kuyedza kugona kutevedzera misimboti yekusimudzira inogamuchirwa munharaunda yevaApache.
Mune ramangwana, nekukurumidza apo chirongwa ichi chinoratidza pachacho chakagadzirira kurarama kwakazvimirira icho chisingade kutariswa kwekuwedzera.
Ipuratifomu inopa zvinowanzo dzoreka masevhisi ekushandisa kwe desktop, zvichibvumira vanogadzira kuti vatarise pamanzwiro ezvavanoshandisa.
Zvimwe zvezvinhu zvikuru zveNetBeans ndezvi:
Manejimendi yeiyo mushandisi interface (menyu uye maturabaramu).
Mushandisi kumisikidza manejimendi.
Kuchengetedza manejimendi (chengetedza kana kurodha imwe mhando yedata).
Wizard Sisitimu (inotsigira nhanho-nhanho dialogs).
Netbeans Visual Raibhurari.
Yakabatanidzwa maturusi ekuvandudza.
NetBeans IDE yemahara, yakavhurwa sosi, muchinjikwa-chikuva nerutsigiro rwakavakirwa mukati rweiyo Java programming mutauro
Apache NetBeans 11.0 Kiyi Nyowani Zvimiro
Nekusvika kweiyi nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 uye nerubatsiro rwehurukuro dzakasiyana inotungamirirwa nenharaunda mugore rapfuura, Mune iyi vhezheni itsva, sarudzo yakaitwa yekushandura dhizaini yekugadzira chirongwa chitsva.
Izvozvo Pamusoro pekutsigira Apache Svosve, zvichipiwa mukana, maviri matsva sarudzo akawedzerwa: "Java neMaven" uye "Java ine Gradle".
Kune rimwe divi futi Zvinogona kucherechedzwa kuti JDK 12 Tsigiro yakatowedzerwa mune iyi vhezheni, pamwe nekubatanidzwa kweshanduro nyowani ye nb-javac compiler ine rutsigiro rwe Java 12.
Syntax kujekesa, kugadzirisa, kugadzirisa, uye kuenderana yemataurirwo e "shanduko" akawedzerwa zvakanyanya.
Kune rimwe divi, sezvatakambotaura pakutanga suye akawedzera kutsigira kwekuyedza kweiyo nyowani fomu yekutaura ye »chinja» chakaonekwa muJava 12 (chakabatanidzwa mu «–enable-preview» maitiro) uye kugona kushandura fomu rekare kuita idzva.
Java Enterprise Chikwata marezinesi akaongororwa uye JavaEE rutsigiro rwakadzoserwa.
Saizvozvowo, kugona kwekugadzira JavaEE kunyorera uchishandisa Ant, Maven kana Gradle kwakaitwa. Nekuda kwekusaenderana neisensi yeApache, JBoss 4, WebLogic 9, uye websvc.switmodellext module yamiswa.
Tsigiro yeiyo Gradle yekuvaka system yakawedzerwa mune iyo vhezheni uye maficha anofungidzirwa kufamba kuburikidza neGradle musangano zvinyorwa uye mabasa, kugona kwekugadzira Gradle mapurojekiti kunopihwa, rutsigiro rwunowedzerwa rwekushandisa Gradle ine bvunzo masystem mayunitsi (JUnit 4/5, TestNG ), Kutsigira kweNetBeans JPA uye Chitubu kunoitwa.
Maitiro ekuisa NetBeans 11.0 paLinux?
Kune avo vanoda kuwana iyi nyowani vhezheni yeNetBeans 11.0 Vanofanira kunge vaine zvirinani iyo Java 8 vhezheni yeOracle kana Vhura JDK v8 yakaiswa pane yavo system uye Apache Ant 1.10 kana yepamusoro.
Iye zvino ivo vanofanirwa kurodha pasi sosi kodhi yekushandisa iyo yavanogona kuwana kubva pane iyi link iripazasi.
Paunenge iwe uchinge waiswa zvese ipapo, unzip iyo ichangoburitswa faira mune dhairekitori raunoda.
Uye kubva kuchipatara tinopinda dhairekitori uye tobva taita:
Kuvaka iyo Apache NetBeans IDE. Paunenge wavaka iwe unogona kumhanyisa iyo IDE nekutaipa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Iyo nyowani vhezheni yeApache NetBeans 11.0 yaburitswa
Kune avo vedu vanoda zvinhu zviri nyore, ikozvino yave kuwanikwa seSnap
sudo snap kuisa netbeans -classic
David naranjo akadaro
Kutenda neiyi imwe nzira yekumisikidza :).
Pindura kuna David Naranjo
Maapplication angu maviri aunofarira ekugadzirisa bhuku, mumhanzi, uye kuunganidzwa kwemamuvhi.
Gimli, yekumberi-kumagumo yekuwedzera yeiyo Visual studio kodhi mukuvandudza